Columbia China Ivula iSibhedlele sesithathu esitsha kunye nesikhulu kunazo zonke eJiaxing
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Columbia China Ivula iSibhedlele sesithathu esitsha kunye nesikhulu kunazo zonke eJiaxing
I-Columbia China, intsebenziswano phakathi kwe-Seattle's Columbia Pacific Management, i-Sheares Healthcare Group, i-100% yenkampani yotyalo-mali yenkampani yase-Singapore iTemasek, kunye ne-Hong Kong-based conglomerate i-Swire Pacific Limited, ivula isibhedlele sayo sesithathu kunye nesikhulu se-500-ebhedi ezininzi ezikhethekileyo kwisibhedlele. Jiaxing, kwiPhondo laseZhejiang.
Isibhedlele saseJiaxing Kaiyi sinikwe ilayisenisi yeebhedi ezingama-500 ezinommandla wokwakha oziimitha ezili-112,000 zesikwere. Yakhiwe ngokungqinelana nemigangatho yeJoint Commission International (JCI) kwaye ijolise ekuboneleleni ngononophelo olugcweleyo lwezigulana kusetyenziswa ubuchwepheshe bezobugcisa bezobugcisa. Ineendawo zemidlalo yeqonga ezili-10 ezibandakanya ii-OT ezi-2 zedijithali, ii-2 DSA, ii-6 LDRP (ezabaSebenzi, ukuHanjiswa, ukuBuyisa kunye nokuPhumela kokubeleka), kunye nezixhobo eziphambili zokuqonda isifo ezinjengeMRI 3.0. Iindleko ezipheleleyo zotyalo-mali zii-US $ 220 yezigidi kwaye isibhedlele sithathe iminyaka emi-3 sakha kwaye sigunyazisa.
Iinkonzo ezinikezelwa kwiSibhedlele iJiaxing Kaiyi zibandakanya ukubonisana nezigulana ezingalaliswayo, iinkonzo zezigulana ezilaliswayo, ingozi & nongxamiseko kunye nokuhlolwa kwezempilo. Iingcali zayo ziquka amayeza angaphakathi, i-oncology, utyando ngokubanzi, i-orthopedic, ukuphefumla, i-urology, i-endocrinology, i-gastroenterology, i-neurology, i-nephrology, i-cardiology, i-dermatology, i-gynecology, ucwangciso lwentsapho, i-hemodialysis, i-pediatrics, ukuvuselelwa kunye neyeza zesiNtu zaseTshayina. Ixhotyiswe ngezixhobo zokuxilonga ezikumgangatho ophezulu ezifana ne-GE's MRI 3.0, i-GE's CT 64, iradiyoloji yedijithali, i-ultrasound, kunye nelebhu yonyango enenkonzo epheleleyo. Izigulane ziya kukwazi ukusebenzisa i-inshurensi yonyango yoluntu kunye neyorhwebo esibhedlele.
"Ngokuvulwa kwesibhedlele sayo sesithathu kunye nesikhulu kunazo zonke, i-Columbia China ijolise ekunikezeni umgangatho ophezulu wokunakekelwa kwezempilo, inkonzo kunye namava esigulane kwi-5.5m yabantu baseJiaxing," kusho uBee Lan Tan, uMongameli kunye ne-CEO yeQela lase-Columbia China. “Ukuvulwa ngempumelelo kwesibhedlele ngexesha lobhubhani ngengazange kwenzeke ngaphandle kokuzinikela nokusebenza kakuhle kukarhulumente weJiaxing kunye nenkxaso yamagosa karhulumente kwiJiaxing Economic and Technological Development Zone. I-Columbia China ihleli izinikezele ekuziseni italente yezonyango kunye nolawulo lwamazwe ngamazwe kunye nezixhobo kwi-Jiaxing, ukuze iimfuno zabemi basekhaya zibonelelwe kakuhle. "
Njengenye yeeprojekthi eziphambili Jiaxing kaThixo "100 Years 100 Projects", ukuvulwa ngokusesikweni Hospital Kaiyi kuya kuba negalelo ekuphuculeni iinkonzo zempilo Jiaxing kaThixo landscape kwaye kwenza ukuba abantu Jiaxing kunye nemimandla engqongileyo ukuba bafumane iindleko-esebenzayo kunye neenkonzo zempilo umgangatho ngamazwe ngaphandle. kufuneka ushiye Jiaxing.
Kumsitho wokuphehlelelwa, iSibhedlele iJiaxing Kaiyi kunye neKholeji yaseZhejiang Tongji zityikitye iSivumelwano sokuQondana ukuze sisebenzisane kuqeqesho lwabasebenzi, uphando lwezenzululwazi kunye nokusungula izinto ezintsha, nokwakha iqonga lokudibanisa ukufunda, ukuziqhelanisa nophando.
Isibhedlele saseJiaxing Kaiyi kunye neJiaxing Taiwan Investing Entrepreneurs Association nayo yatyikitya isivumelwano sokudala indawo yonyango efikelelekayo, engenamthungo, kunye nekhululekileyo yabantu baseTaiwan abahlala nokusebenza eJiaxing.
Njengenxalenye yeSibhedlele iJiaxing Kaiyi uxanduva lwentlalontle, iphinde yanikela nge-100,000 RMB kwiZhejiang Foundation yaBantu abaKhubazekileyo ukuxhasa inkqubo enkulu ye-inshorensi yonyango yabantu abakhubazekileyo. Oku kuya kunceda ukunciphisa umthwalo wezonyango kwizigulana ezinezigulo ezikhulu kunye neentsapho zazo.
UCao Haoqiang, uMongameli weSibhedlele saseJiaxing Kaiyi, uthe “Isibhedlele saseJiaxing Kaiyi sitsale umdla omkhulu eluntwini ukusukela oko savulwa ngoMeyi 20, 2021. Ngexesha lokuvulwa okuthambileyo, iinkqubo zesibhedlele, amaziko, iinkonzo kunye neenkqubo zavavanywa ngokucwangcisiweyo kwaye zavavanywa ngokucokisekileyo. abasebenzi bezonyango kwisebe ngalinye baqeqeshelwa ukunikela eyona nkonzo ibalaseleyo kwizigulana zethu.”
Ngempendulo efunyenweyo ekuvuleni okuthambileyo, siye saseka "Iziko looGqirha abadumileyo", sijolise ukuzisa oogqirha abagqwesileyo eChina ukubonelela ngononophelo oluphezulu kubantu baseJiaxing.
Kunye nophehlelelo olusemthethweni, iSibhedlele iJiaxing Kaiyi sikwatyhilile ngokusesikweni ukusetwa kwe "Shanghai Famous Orthopedic Physicians 'Jiaxing Kaiyi Centre", ngentsebenziswano nezibhedlele ezininzi ezidumileyo zemfundo ephakamileyo kunye nezibhedlele zamathambo eShanghai. ISibhedlele iJiaxing Kaiyi sijolise ekuboneleleni ngodliwano-ndlebe noogqirha baseShanghai “emnyango” kaJiaxing.
Ukubuyisela eluntwini, ukusukela nge-21-23 ye-Okthobha, iSibhedlele iJiaxing Kaiyi sibambe iklinikhi yesisa ye-“Women’s Care Day – Intelligent AI Breast Screening for Cancer”, ithatha uxanduva loluntu ngempilo yabasetyhini. I-AIBUS, i-robot ehlakaniphile yokuhlola isifuba se-ultrasound, kunye neqela lethu logqirha liya kuqhuba ukuhlolwa kunye nokwenza imisebenzi yemfundo yezempilo kwiindawo ezilandelayo - i-Jiaxing Yu Xin Community, i-Cao Zhuang Community, i-Haiyan Bolite Paper kunye ne-Huixin Import & Export Group. Isibhedlele iJiaxing Kaiyi siza kuqhuba uvavanyo lwebele lomhlaza nalo.